Taariikhda My Butros » Waxaad diyaar u tahay huran Butros A?
Last updated: May. 20 2020 | 2 min akhri
Wax aan ogaaday halka in jaamacad ahaa cadadka dadka waan ogaa iibsashada iyo / ama ku dhaqmayaan xayawaankaaga. Waxaan lahaa saaxiibo iyo kuway isbarteen in isuna dhammaan noocyada kala duwan ee xayawaanka guriga lagu jiro sano oo waxbarasho-bisadaha sare kadib ay, eeyaha, Shimbiraha, kalluunka, bakaylaha, hedgehogs iyo xitaa doofaarka caloosha dheri.
Waxay u muuqan kara wax duufsan in uu ordo oo aad hesho xayawaan rabaayad ah laakiin waxa aad ku fekereyso in ay ka go'antahay in ay la socdaan yimaado xawayaan rabbaayadaysan? Haa, xayawaankaaga leh jacaylka aad shuruud la'aan oo waxaa jiri kuu inta lagu jiro oo dhan u sarreeya iyo hooseyso ee nolosha, laakiin waxay u baahan tahay xoogaa daryeelka arrin. Halkan waxa ku yaala dhawr talo oo kaa caawinaya in aad go'aan ka gaarto haddii aad diyaar u tahay:
Xayawaanka waa ballanqaad maaliyadeed
Xayawaankaaga Qaar ka mid noqon kartaa kharash yar iyo xayawaanka qaar ka bilaabi kartaa qiimo jaban ah laakiin si tartiib ah aad ku kici maal yar. Muddo sanado ah, my eey lahaa dayactirka si caddaalad ah u fududahay. Isagu waa eey yar, si uu cunto qaadashada yaraa oo uu marmar dhif ah ayaa si ay u booqdaan dhakhtarka xayawaannada. Si kastaba ha ahaatee, inuu dhow yahay 15 iyo hadda dadka waayeelka ah iyo kuwa buka. Daawooyinka uu ku kici gacan iyo lug ah bil kasta. Sida aadanuhu, Xayawaanka jiradaan loo eegin da'da ama hab nololeed. Ma awoodaa inaad ah madaafiic kaga soo bixiyeen lacagtii, iyo sidoo kale waqtigii aad xayawaanka? Tani waa wax u baahan in la tixgeliyo.
Xayawaanka waa waqti go'an ah
In kasta oo xayawaan guri qaar ayaa waxay sheegtay in "dayactirka hooseeyo" ay weli u baahan yihiin waqti qaar ka go'an iyaga si maalinle ah. Quudinta, qurxintaada iyo jimicsi yihiin kaliya dhawr waxyaalood in la tixgeliyo marka ay timaado daryeelka maalmeed ee xayawaanka ah. Haddii aad si joogto ah u safraya ama waqti dheeraad ah dugsiga ama shaqada ka dibna guriga, waxaa fikrad wanaagsan ah in ay joojiyaan keensashada xayawaanka la wakhtigan la joogo. Waxay noqon kartaa culays dadka kale haddii aad si joogto ah warsanaya inay salaaxid-fadhiisan aad xoolaha inta aad maqan tahay. Waxaa laga yaabaa in marka aad nolosha noqdo deggenaasho noqon lahayd markii ugu ra'iisul si aad u hesho xayawaan rabaayad ah.
Xayawaanka tahay go'an tahay muddo-dheer
In kasta oo xawayaan haboon laga yaabaa in aad u dhaqanto hadda, doono ay sanadka soo socda? In 5 sano? In 10 sano? Waxaan fahamsanahay doonayo si aad u hesho xayawaan rabaayad ah, laakiin aqbalayaan in xoolaha tahay go'an tahay muddada-dheer waa lagama maarmaan. Dad fara badan ayaan ku garanayaa kii lahaa xayawaanka guriga lahaa inay iyaga u gacangeli ka dib ku hoos wadada sababtoo ah waxay no daryeeli karin iyaga. Waxay lahayd xayawaanka in halka dugsiga laakiin mar ay ka qalin iyo dhaqaaqay magaalada cusub ama guri ay ku guuleysan waayeen in ay qaataan xayawaanka iyaga la. Waa go'aan cidina ma doonayso in la sameeyo, si ay qeyb xayawaanka ay jeclaayeen ee isagoo, ama ku meel gaar ah ama joogto ah. Similar in ay ka go'an tahay mar, laga yaabee in aad sugto ilaa aad nolosha ka yar kulamada yar a.
Sidaas hor aad baxdo, qaaddaana xayawaanka ah, aad sameyso cilmi-baarista iyo u malaynaysaa qorshayaasha mustaqbalka. Raadso nooca xayawaanka aad rabto, waxa loo baahan yahay in si fiican loo is ogow iyaga iyo haddii shuruudaha kuwa haboon nololeed ee hadda. Ma jiraan wax ka qaldan oo ay daahiyaan in helitaanka xayawaan rabaayad ah ilaa aad diyaar u yahay, ee ha ku degdegin go'aan.
Top 10 Guddomiyaha Ururka Ragga samee marka aad la xiriireyso Haweenka Online
6 Talooyin in ay ka bad Bilaha xagaaga, Solo!